Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; Vonjeo aho, dia ho voavonjy; Fa ianao no fiderako. Jer 17:14
Ry havana malala, anio ny famonjen'ny Tompo dia azonao raisina indray. Koa sahia mangataka Aminy tahaka an'i Jeremia manao hoe: "Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; Vonjeo aho, dia ho voavonjy; Fa ianao no fiderako." Azo antoka izany famonjena izany ka fantaro fa AFAKA MANDRAY NY FAMONJENA NY MINO.
1- SATRIA MPANASITRANA NY TOMPO (And 14a)
Eto dia mivavaka mitady fanasitranana amin'Andriamanitra i Jeremia. Tsapany tokoa mantsy fa marary izy noho ny ataon'ireto Zanak'Israely ireto izay ambara eto fa mikomy sy mivadika amin'Andriamanitra ary tsy mahatoky ny teninyka manenjika ny mpaminaniny. Tao anatin'izany endrim-panenjehana izay heverin'i Jeremia fa naharary azy izany no nanatonany an'Andriamanitra mba hitadiavany fahasitranana satria natoky ny tenin'ny Tompo izy.
Fa ho antsika koa ry havana, mety misy endrika maro ny isehoan'n aretina eo amin'ny fiainantsika, mety tsy marary ara-nofo isika fa marary fanahy kosa. Ary na inona na inona aretina mahazo antsika amin'izao fiainana izao dia andoany ny tenin'Andriamanitra no mampianatra ahy sy ianao mba hahay hanankina ny aretintsika amin'ny Tompo toy ny nataon'i Jeremia satria ny Tompo mpanasitrana ka afaka mandray famonjena isika.
Koa meteza ary isika hitondra ireo karazan'aretina eo amin'ny Tompo ary izany indrindra ambaran'i Isaia 53:4 manao hoe "Nitondra ny aretintsika tokoa Izy no sady nivesatra ny fahorintsika". Koa anjarantsika te ho sitrana no mametraka ny aretintsika sy ny fahoriantsika eo amin'i Jesoa Kristy satria Izy no afaka hanasitrana sy hanala antsika amin'ny rofy rehetra. Ary Izy no hahatonga antsika Mpino afaka mandray ny famonjena eo amin'ny fiainana.
Tsy ny fanasitranana antsika fotsiny anefa ny programan'Andriamanitra fa afaka amndray ny famonjena koa ny mino noho izao antony izao:
2- SATRIA MPAMONJY NY TOMPO (And 14b)
Nandraiky narary fo mihitsy ny mpaminany Jeremia manoloana ny fiodinan'ny Israely sy ny fivadihan'ny Joda tamin'ny Tompo, raha efa nikely aina fatratra izy ny hiverenan'izy ireo amin'ny Tompo. Impiry moa ny Tompo no efa niteny hoe "Sasao ny fonao ho afaka amin'ny ratsy, mba ho vonjena ianao" (Jer 4:14), nefa tsy nihaino ny feony izy ireo.
Fantatr'i Jeremia fa ny Tompo no fanantenana, hany ka nitaraina taminy izy nanao hoe "Sitrano aho dia ho sitrana, vonjeo aho dia ho voavonjy" (and 14). Nino izy fa marina ny fanambaran'ny Tompo ny amin'ny hoe "Izao no lazain'ny Tompo" (and 5).
Mety hahatratra ny tsirairay izao mianjady amin'i Jeremia izao ny amin'ny tsy firarahian'ny olona ny filazantsara sy ny vaovao mahafaly izay toriana sy ambara aminy, toy ny efa nianjady tamin'i Jesoa ihany koa, maro ireo nanenjika Azy noho ny asa soa nataony. Mpanambara ny vaovao mahafaly ianao? Mpamonjinao ny Tompo. Anambara ny vaovao Mahafaly ianao? Afaka mamonjy anao ny Tompo raha mino ianao. Tsy ho nofinofy aminao intsony ny tenin'i Jesoa hoe "Tsy voalaza ve fa raha hino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?" (Jao 11:40). Ary tsy ho anganongano aminao intsony ny hoe "Ny finoanao no hamonjy anao" (Mar 5:34).
Aza misalasala ary manomboka anio, raiso i Jesoa eo amin'ny fiainanao dia hanasitrana sy hamonjy anao amin'ny zavatra rehetra Izy. Ho an'Andiamanitra irery anie ny voninahitra! Amen.